Malunga Nathi-Owon Technology Inc.
Inkampani Owon Technology Inc.
I-OWON Technology (inxalenye yeQela le-LILLIPUT) yi-ISO 9001: i-2015 eqinisekisiweyo yoMvelisi woYilo oluQinisekisayo ekuyilweni nasekuveliseni iimveliso ezinxulumene ne-elektroniki kunye ne-IoT ukususela ngo-1993. inikeza zombini iimveliso ze-IoT ezisemgangathweni kunye nezisombululo ze-IoT zesiko kwizinto eziluncedo, iiTelco's, iintambo zabaqhubi, abakhi bezindlu, ulawulo lwepropathi, iikontraka, ii-aggregators zenkqubo, kunye namajelo okuthengisa.
Kwinqanaba lesixhobo, ukongeza ekuboneleleni ngeentlobo ngeentlobo zeemodeli ezisemgangathweni, i-OWON ikwayila kwaye yenze ngokweemfuno zabathengi ngokuthe ngqo ukuhambelana neenjongo zabo zobugcisa.Kwinqanaba lenkqubo, ngaphezulu kwe-off-the-shelf yokuhlala kunye neenkqubo ze-IoT zorhwebo, i-OWON ikwabonelela nge-Open-API epheleleyo yokuhlanganiswa kwenkqubo ukufezekisa iinjongo zoshishino ezizodwa zamaqabane ethu.
—— Inkonzo yobuNgcali yeODM ——
-Dlulisa izimvo zakho kwisixhobo esibambekayo okanye inkqubo
I-OWON inamava kakhulu ekuyileni nasekulungiseni izixhobo zombane ezichazwe ngokweemfuno zomthengi.Singanikezela ngeenkonzo zobugcisa zeR&D ezigcweleyo ezibandakanya ushishino noyilo lwesakhiwo, ihardware & uyilo lwePCB, ifirmware & noyilo lwesoftware, kunye nokuhlanganiswa kwenkqubo.
—— Inkonzo yokuVelisa eSebenza ngeXabiso——
-Hambisa ngepakethe yenkonzo epheleleyo ukufezekisa injongo yeshishini lakho
I-OWON iye yabandakanyeka ekuveliseni umthamo wemveliso ye-elektroniki esemgangathweni kunye neyenziwe ngokwezifiso ukususela kwi-1993. Ukutyhubela iminyaka, i-OWON iqokelele amava amaninzi kunye nobuchule bokuvelisa imveliso, njengoLawulo lweMveliso yeMisa, ukuPhathwa koMgangatho wokuThenga, ukuPhathwa koMgangatho opheleleyo, njl.
● Isicwangciso esisekelwe kubuchwepheshe esenza ukuba kubekho isakhono esivakalayo seR&D nokuphunyezwa kobugcisa.
● Iminyaka engama-20 yamava okwenziwa axhaswe ngonikezelo olukhulileyo nolusebenzayo.
● Izibonelelo zabasebenzi ezizinzileyo nezingaguqukiyo kwakunye nokubandakanyeka kwabasebenzi okusebenzayo ngenxa yenkcubeko yeshishini “Yokunyaniseka, Ukwabelana kunye neMpumelelo”.
● Ukudibanisa "Ukufikeleleka kwamanye amazwe" kunye "Yenziwe e-China" iqinisekisa ukwaneliseka kwabathengi bezinga eliphezulu ngaphandle kokuncama ukusebenza kweendleko.